Coatings World 34.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 34.0 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Application မ်ား စီးပြားေရး Coatings World
Coatings World ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
The Global Coatings Market is valued at approximately $93 billion. From billion-dollar coatings super-companies such as AkzoNobel, Sherwin-Williams, PPG and Valspar to the regional manufacturers and niche players operating across the world, the coatings marketplace remains one of the most competitive in the manufacturing world. Coatings World is the leader in global coverage of the paint and coatings industry. No other publication delivers the editorial content Coatings World does. In-depth reports cover major end markets for the global coatings market, as well as the latest developments in chemistry and manufacturing processes. Along with our in-house editorial staff and contributing editors based in the U.S.
အဆိုပါ Global အင်ျကြီကိုစျေးကွက်ကခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ 93 ဘီလျံခန့်တန်ဖိုးရှိပါသည်။ ဒေါ်လာဘီလျံကုတ်အင်္ကျီကနေထိုကဲ့သို့သော AkzoNobel, Sherwin-Williams က, PPG နှင့် Valspar အဖြစ်က super-ကုမ္ပဏီတွေကိုကမ္ဘာအနှံ့လည်ပတ်ဒေသတွင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် niche ကစားသမားတွေရန်, အင်္ကျီ, ဈေးကိုထုတ်လုပ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုများထဲမှတစ်ခုကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အင်ျကြီကိုကမ္ဘာ့ဖလားကိုဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ကုတ်အင်္ကျီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမှတပါးအခြားသောထုတ်ဝေအင်ျကြီကိုကမ္ဘာ့ဖလားမကိုအယ်ဒီတာအဖွဲ့အကြောင်းအရာများကိုကယ်တင်တတ်၏။ in-အနက်အစီရင်ခံစာများကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်ျကြီကိုစျေးကွက်ကအဓိကအဆုံးဈေးကွက်ကိုဖုံးလွှမ်းအဖြစ်ဓာတုဗေဒနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-အိမ်သည်အယ်ဒီတာများနှင့်အတူနှင့်အမေရိကန်အခြေစိုက်အယ်ဒီတာပံ့ပိုး
ဤလျှောက်လွှာကို GTxcel, ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေနည်းပညာ, အွန်လိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေနှင့်မိုဘိုင်း app များမဂ္ဂဇင်းရာပေါင်းများစွာ၏ပံ့ပိုးသူတစ်ဦးခေါင်းဆောင်များက powered ဖြစ်ပါတယ်။
Coatings World အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Coatings World အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.04k 7.42M
Coatings World ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Coatings World အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 34.0
ထုတ်လုပ်သူ Rodman Media
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.gtxcel.com/privacy
App Name: Coatings World
Release date: 2018-12-07 07:34:57
လက်မှတ် SHA1: A8:6A:F7:1B:63:27:43:7E:54:1C:1B:13:86:CD:72:F3:46:7C:16:C5
အဖွဲ့အစည်း (O): Texterity Inc.
နယ်မြေ (L): Southborough
Coatings World APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ